]Rayson | queen ohiri isi n'elu matarasị na igbe spring
Rayson | queen ohiri isi n'elu matarasị na igbe spring
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa Best 10inch White Memory ụfụfụ matarasị Supplier
Ngwaahịa a bụ ukwuu na-emegide nje. Ya ihe na-egosi mmiri-wicking onwunwe nwere ike n'ụzọ dị irè enyemaka gbochie uto nke isi na-eme ka ụmụ nje na ụkwụ.
Rayson Global Co., Ltd bụ a Sino-US nkwonkwo ịmalite, guzosie ike na 2007 bụ nke dị Shishan Town, Foshan High-Tech Mpaghara, na ọ na-sited nso ama ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka V
N'ihi ya, anya, Rayson mechaa mba quality management usoro asambodo. All ngwaahịa gụnyere anyị ọhụrụ ngwaahịa na-ọnọ na otutu imewe, na-ekwe nkwa àgwà, na mpi ahịa. Mgbe afọ nke mmepe, anyị guzosie ike ruo ogologo oge nkwado mmekọrịta anyị na ndị ahịa n'ụwa nile. Biko obi ike na anyị nwere ikike na-mbupụ ngwaahịa na a ga-enweghị mmebi mere na napụta ngwongwo. Anyị ji obi anyị na-anabata gị ase na oku na-aga. Na zuru ezu mmepụta edoghi na ahụmahụ ọrụ, Rayson nwere onwe ha chepụta, ịzụlite, rụpụta, ma nwalee niile ngwaahịa ke oru oma n'ụzọ. N'ime usoro dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-ahụ maka usoro ọ bụla iji hụ na ngwaahịa dị mma. Ọzọkwa, nnyefe anyị na-abịa n'oge ma nwee ike gboo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na a na-ezigara ndị ahịa ngwaahịa ndị dị mma na mma. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ na-achọ ịma ihe banyere anyị, na-akpọ anyị ozugbo. Ebe ọ bụ na ike, Rayson Aims-enye ohere pụrụ na nnukwu ngwọta maka ahịa anyị. Anyị ike anyị R&D center maka ngwaahịa imewe na ngwaahịa mmepe. Anyị na-agbaso usoro njikwa mma ọkọlọtọ iji hụ na ngwaahịa anyị zutere ma ọ bụ gafere atụmanya ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ mgbe-ahịa maka ndị ahịa n'ụwa niile. Ahịa ndị chọrọ ịmatakwu banyere anyị ọhụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị, dị nnọọ kpọtụrụ anyị.
Gịnị ịkwụ ụgwọ ụzọ i na-anabata? LC na anya / site TT, 30% Deposi na 70% itule bụ megide mbipụta nke mbupu akwụkwọ witinin 7 arụ ọrụ days.How ka itopusi a afụkọta matarasị? 1.Place katọn jidesie a ewepụghị elu gị ime, jiri nlezianya na sere matarasị si na ebe jidesie gị bed. 2.Carefully bee elu bag na mkpa na-eme ka n'aka na-adịghị bee plastic ọjọọ n'ime ma ọ bụ na-enwe, adịghị kpọpụ a mma. 3.Roll si agụụ-akàrà, matarasị jidesie gị bed 4.Carefully bee plastic akpa tinyere nche dị ka matraasi ntabi-amalite decompress, Wepu plastic akpa. 5.Allow 24 awa maka ọhụrụ gị matarasị ka n'ụzọ zuru ezu expand.May m gara na gị factory? Ee, na-anabatanụ ileta anyị factory n'oge ọ bụla, anyị na-nso Guangzhou Baiyun mba ọdụ, ọ dị nnọọ otu hour site ụgbọ ala, na anyị pụrụ ime ndokwa ụgbọala eburu gị.
Mgbe afọ nke siri na ngwa mmepe, Rayson ebiliwo ghọọ otu n'ime ndị kasị ọkachamara na akpa ụlọ ọrụ dị na China. queen ohiri isi n'elu matarasị na igbe spring Anyị na-e-etinye a ọtụtụ na ngwaahịa R & D, nke amama ịdị irè na anyị nwere queen ohiri isi n'elu matarasị na igbe opupu ihe ubi. Ịdabere na anyị na-achọpụta na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ, anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa nke kacha mma na ngwaahịa, ndị kasị mma ahịa, na ndị kasị saa mbara ọrụ dị ka nke ọma. Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla questions.The imewe nke Rayson ewe ihe dị iche iche echiche, gụnyere ákwà ụdị, na akwa akwa ụzọ, mkpado imewe, na kenha nke ngwa.